Guddiga Doorashooyinka oo labo garab u kala jabay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddiga Doorashooyinka oo labo garab u kala jabay
U jeedka Khilaafkaan, ayaa salka ku haya damaca qaar ka mid ah Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada oo doonaya in ay isku sharaxaan xilka MW Soomaaliya, isla-markaana doonaya in ay sidii kuraastii Aqalka sare u boobaan Aqalka hoose.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddiga Doorashada heer Federaal ayaa maanta shaaciyay jadwalka Doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka, waxaana habraacaan awood buuxda lagu siiyay Odoyaasha dhaqanka kuwaas oo soo xuli doona ergada dooraneysa xildhibaannada oo tiradooda guud tahay 27,725 ergo.
Hayeeshee, Waxaa durba soo baxaya warar sheegaya in arrinkaas guddigu ku kala qeybsamay, kadib markii habraaca lagu meelmariyay cod gacan taag ah, isla-markaana ay ansixintiisa isku raaceen Saddex maamul goboleed iyo Gobolka Banaadir.
Sida ay caddeynayaan xogo hoose, oo ay heshay Keydmedia Online, xubnaha Guddiga ee ka socda Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, ayaan ku qanacsaneyn habraaca soo baxay, waxayna taageersanyihiin, habraacii doorashada Aqalka hoose ee Golaha Wadatashiga Qaranka, sida qarsoodiga ah u meel mariyay Bishii Juun.
Waxaa khilaafkaan cusub muujiyay Wasiir Cabdirashiid Jire Qalinle, oo ka tirsan Xukuumadda Axmed Madoobe, kaas oo qoraal gaaban oo bartiisa Facebook uu soo dhigay ku sheegay in Guddiga hirgelinta Doorashooyinka heer Federal, howsha loo igmaday ay tahay kaliya fulinta heshiisyada iyo habraacyada ay ku heshiiyaan Madaxda Madasha Qaran. “Waana la dhameystiray howshaas”. Ayuu yiri, isagoo durayay habraaca cusub.
Sida aan dhawaan baahinnay, Hindisaha Xulidda Ergooyinka Doorashada, oo ay hore go’aan uga gaareen Golaha Wadatashiga Qaranka, in muddo ah ay hoos ku hayeen ayaa ugu danbeyn bannaanka u soo baxay, waxaana soo xulidda ergooyinka ee habraacaas tilmaaamayo awood buuxda ku leh Madaxda Maamul-goboleedyada, taas oo sababtay in Mucaaradku yeeshaan shir Saddex maalin ka socday Muqdisho.
Dhawaan Guddoomiyaha Guddiga Maxamed Cirro, wuxuu sheegay in uusan jirin wax habraaac ah oo Golaha Wadatshigu soo saaray, wuxuuna si dadban Madaxda Maamul goboleedyada ugu eeday in ay doonayaan boobka kuraasta Golaha Shacabka.
Golaha Wadatashiga oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha ayaa la rajeynayaa in Khamiista soo socota isugu yimaadaan Muqdisho, halkaas ayaana go’aanka kama danbeysta ah looga gaari doonaa habraaca doorashooyinka Aqalka hoose.